Tsy ny rafitra no olana fa ny olona mipetraka eo amin’ilay rafitra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Axian University pour révéler les talents africains il y a 7 heures
Mandady rariny ! il y a 8 heures
« Amboary ny lalan’ny Tompo » il y a 8 heures
La solidarité et le partenariat fonctionnent bien. il y a 9 heures
Le projet 20by2020 pour améliorer la qualité de l'eau dans les communautés rurales de Madagascar. il y a 2 jours
Tsy manara-penitra izany izay tsy afaka mampiasa ordinatera ? il y a 3 jours
Le paranoïa du colisée d’Antananarivo il y a 3 jours
On peut remplacer le riz par le soanambo il y a 4 jours
Raha iverenana ny tamin’ny fisokafan’ny lalam-pirenena voalohany na ny RN1 ny sabotsy 15 septambra lasa teo. Nisy tamin’ireo taksiborosy no voasakana tetsy Ambodisaha Ambatomirahavavy sy tao Arivonimamo. Saika nahiditr’ireo mpitandro filaminana fourrière satria tsy manara-dalana hono. Nisendaotra ireo kaoperativa. Raha nifanarahana tamin’ny Att sy ireo tompon’andraikitra taty amin’ny foibe dia mijanona amin’ny isan’ny olona ao anaty licence ny isan’ny olona entin’ireo taksiborosy régional ary tsy misondrotra ny sarany. Tsy izay kosa ny nataon’ny tany amin’ny faritra fa efatra isaky ny banc fa afaka misondrotra ny saran-dalana. Nantsoina daholo ireo mpanapa-kevitra isan-karazany, saingy sahirana ireo mpitatitra vao voavaha ny olana.
« Betsaka ny trangan-javatra tahaka izany » hoy Atoa Rakotoson Dany mpanao politika, raisina fotsiny ny hoe tsy mandoa hetra isika amin’izao hoy ny mpitondra, fa tsy izay no zava-misy rehefa tonga any amin’ny contribution. « Azonareo atao fotsiny ny taratasy hoe rahoviana ianao no afaka mandoa azy. »
Mila olona mahay mitantana Firenena isika, mahafehy ny administration, mila olona vonona. Matetika dia ny rafitra foana no tadiavintsika ovaina. « Mampalahelo izao ny maheno hoe andao ovaina indray ny Antenimierandoholona ». Tsy ny rafitra no olana fa ilay olona mipetraka eo amin’ilay rafitra. Mila ny fanatsarana ifotony izay zavatra izay. Izany hoe olona tokony niaina izany ideolojia politika izany, mahay manao analyse politika, mahafantatra ny resaka administration… Mila jerena tsara izany fa manjary manaonao foana. Hevero fa na ny fotoana lany, ny crédit lanin’ireo mpitatitra nifampiantso sy niantsoana ireo tompon’andraikitra isan-karazany dia tena fatiantoka tokoa. Matoa ny olona mandeha any Tsiroanomandidy ohatra dia misy zavatra endrehina, nefa noho ny tsy fitovian-kevitra teo amin’ny mpanapa-kevitra taty amin’ny foibe sy tany amin’ny faritra dia tsy vitany izay nokasainy ho natao. Ireo olona ireo anefa no eritreretina handoa hetra izay fidiram-bolam-panjakana. Maro amin’ireny toerana ireny no toerana natao ho an’ny mpanao politika. Tekinisianina anefa no lasa manao ilay asa. Miteraka korontana eo amin’ny fandehan-draharaha izany sady sakana ihany koa eo amin’ny fampandrosoana. Tsy mahagaga raha tsy mitovy ny fanapahan-kevitra aty amin’ny foibe sy ny any amin’ny faritra.
Fijerena ireo olona tsara sivana amin’ny rafi-panjakana, izany hoe lasa ho filoham-pirenena, solombavambahoaka, Ben’ny Tanana…Politika foana ireo, torak’izany koa ny any amin’ny minisitera isan-karany any. Fahadisoana ny ataon’ny mpitondra mametraka tekinisianina amin’ny postes ministérielles. Poste politika ny minisitra, olona tokony mitovy ideolojia politika sy fisainana amin’ny mpitondra no mandray io toerana io.
Be loatra ireo antoko politika eto amintsika. Farafaharatsiny mba telo, dia ny hery ankavanana, ny hery afovoany ary ny ankavia. Ny an’ny amerikanina raha nanao ny azy izy dia anankiroa, ny ankavia sy ankavanana. Ny antsika kosa dia telo satria amin’izao fotoana izao dia misy ny ezaka atao amin’ny tontolo iainana izay tokony hananana ideolojia manokana. Ny antoko mibahana eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao dia hery ankavanana saika mpandraharaha sy misahana toe-karena daholo, kapitalista ihany koa izy ireo. Izay manana foto-kevitra resaka toe-karena, kapitalista dia tokony hitambatra any amin’ny hery ankavanana, izay miresaka momba ny sosialy, humaniste dia mitambatra any amin’ny hery ankavia, ary ny eo afovoany dia izay manana ny foto-kevitra mikasika ny tontolo iainana. Tsy ny rafitra mihitsy no olana eto amintsika fa ireo olona mipetraka eo amin’izany rafitra izany. Mila fiomanana, sy fanofanana mba hampandroso, tsy hanaotao foana ka handrendrika ny Firenena. Tsy mety ny tongatonga ho azy.
Université d’entreprise : Axian University pour révéler les talents africains - il y a 7 heures
Matoan-dahatsoratra : Mandady rariny ! - il y a 8 heures
Point de vue : Le paranoïa du colisée d’Antananarivo - il y a 3 jours
Tantara sy ny Malagasy : Nampizara ny Malagasy ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananan-tany - il y a 10 jours